CIES က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ကြေး အမြင့်ဆုံး ကစားသမားများ
ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ကစားသမားဖြစ်လာတဲ့ စပါးတိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်း
4 Jun 2018 . 6:45 PM
CIES က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ကစားသမားအဖြစ် စပါးတိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီးကိန်း Harry Kane က ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသုတေသန အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CIES က ဟယ်ရီကိန်း Harry Kane ရဲ့ တန်ဖိုးကို ယူရို (၂၀၁.၂)သန်း အထိ သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟယ်ရီကိန်း Harry Kane ရဲ့ နောက်မှာတော့ PSG တိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ နေမာ Neymar နဲ့ ဘာပေ Mbappe တို့က အစဉ်လိုက် ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမား နေမာ Neymar ရဲ့ တန်ဖိုးက ယူရို (၁၉၇.၅)သန်းအထိရှိနေပြီး ပြင်သစ် လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဘာပေ Mbappe ရဲ့ တန်ဖိုးက ယူရို (၁၈၆.၅)သန်းအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ CIES က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ကစားသမား ထိပ်ဆုံး (၁၀)ယောက်မှာ နိုင်ငံ (၆)က ကစားသမားတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်က ဟယ်ရီကိန်း Harry Kane နဲ့ အယ်လီ Alli၊ ဘယ်လ်ဂျီယံက ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne နဲ့ လူကာကူ Lukaku၊ အာဂျင်တီးနားက မက်ဆီ Messi နဲ့ ဒီဘားလား Dybala၊ ပြင်သစ်က ဂရစ်ဇ်မန်း Griezmann နဲ့ ဘာပေ Mbappe၊ ဘရာဇီးလ်က နေမာ Neymar နဲ့ အီဂျစ်က ဆာလာ Salah တို့ ထိပ်ဆုံး (၁၀)ယောက် စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo ကတော့ ထိပ်ဆုံး (၁၀)ယောက် စာရင်းမှာ မပါဝင်ခဲ့ဘဲ အဆင့် (၂၄)နေရာမှာသာ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo ရဲ့ တန်ကြေးက ယူရို (၁၀၃.၄)သန်း ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ထိပ်ဆုံးကစားသမား အယောက် (၁၀၀)စာရင်းမှာ အသက်အကြီးဆုံး ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အေစီမီလန်အသင်းရဲ့ အသက် (၁၉)နှစ်အရွယ်ရှိ လူငယ်ဂိုးသမား ဒွန်နာရမ်မာ Donnarumma ကတော့ ယူရို (၆၇.၅)သန်းနဲ့ အဆင့် (၇၃)နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ကစားသမားစာရင်းမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
CIES မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ကစားသမား ထိပ်ဆုံး (၁၀)ယောက်
၁. ဟယ်ရီကိန်း Harry Kane ယူရို (၂၀၁.၂)သန်း
၂. နေမာ Neymar ယူရို (၁၉၅.၇)သန်း
၃. ဘာပေ Mbappe ယူရို (၁၈၆.၅)သန်း
၄. မက်ဆီ Messi ယူရို (၁၈၄.၂)သန်း
၅. ဆာလာ Salah ယူရို (၁၇၁.၃) သန်း
၆. အယ်လီ Alli ယူရို (၁၇၁)သန်း
၇. ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ယူရို (၁၆၇.၂)သန်း
၈. ဂရစ်ဇ်မန်း Griezmann ယူရို (၁၆၄.၅)သန်း
၉. ဒီဘားလား Dybala ယူရို (၁၆၄.၂)သန်း
၁၀. လူကာကူ Lukaku ယူရို (၁၆၃.၄)သန်း
Photo:UOL Esporte, Goal.com, RMC Sport – BFMTV
ကမ်ဘာ့တနျကွေးအမွငျ့ဆုံး ကစားသမားဖွဈလာတဲ့ စပါးတိုကျစဈမှူး ဟယျရီကိနျး
CIES က ထုတျပွနျတဲ့ ကမ်ဘာ့တနျကွေးအမွငျ့ဆုံး ကစားသမားအဖွဈ စပါးတိုကျစဈမှူး ဟယျရီးကိနျး Harry Kane က ရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ နာမညျကြျော ဘောလုံးသုတသေန အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ CIES က ဟယျရီကိနျး Harry Kane ရဲ့ တနျဖိုးကို ယူရို (၂၀၁.၂)သနျး အထိ သတျမှတျပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဟယျရီကိနျး Harry Kane ရဲ့ နောကျမှာတော့ PSG တိုကျစဈကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ နမော Neymar နဲ့ ဘာပေ Mbappe တို့က အစဉျလိုကျ ရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ ဘရာဇီးလျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကစားသမား နမော Neymar ရဲ့ တနျဖိုးက ယူရို (၁၉၇.၅)သနျးအထိရှိနပွေီး ပွငျသဈ လူငယျတိုကျစဈမှူး ဘာပေ Mbappe ရဲ့ တနျဖိုးက ယူရို (၁၈၆.၅)သနျးအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယျ။ CIES က ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့တနျကွေးအမွငျ့ဆုံး ကစားသမား ထိပျဆုံး (၁၀)ယောကျမှာ နိုငျငံ (၆)က ကစားသမားတှေ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ အင်ျဂလနျက ဟယျရီကိနျး Harry Kane နဲ့ အယျလီ Alli၊ ဘယျလျဂြီယံက ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne နဲ့ လူကာကူ Lukaku၊ အာဂငျြတီးနားက မကျဆီ Messi နဲ့ ဒီဘားလား Dybala၊ ပွငျသဈက ဂရဈဇျမနျး Griezmann နဲ့ ဘာပေ Mbappe၊ ဘရာဇီးလျက နမော Neymar နဲ့ အီဂဈြက ဆာလာ Salah တို့ ထိပျဆုံး (၁၀)ယောကျ စာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ နာမညျကြျော တိုကျစဈမှူး စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo ကတော့ ထိပျဆုံး (၁၀)ယောကျ စာရငျးမှာ မပါဝငျခဲ့ဘဲ အဆငျ့ (၂၄)နရောမှာသာ ရပျတညျခဲ့ပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo ရဲ့ တနျကွေးက ယူရို (၁၀၃.၄)သနျး ဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့တနျကွေးအမွငျ့ဆုံး ထိပျဆုံးကစားသမား အယောကျ (၁၀၀)စာရငျးမှာ အသကျအကွီးဆုံး ပါဝငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ အစေီမီလနျအသငျးရဲ့ အသကျ (၁၉)နှဈအရှယျရှိ လူငယျဂိုးသမား ဒှနျနာရမျမာ Donnarumma ကတော့ ယူရို (၆၇.၅)သနျးနဲ့ အဆငျ့ (၇၃)နရောမှာ ရပျတညျနိုငျခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့တနျကွေးအမွငျ့ဆုံး ကစားသမားစာရငျးမှာ ရပျတညျခဲ့တဲ့ အသကျအငယျဆုံး ကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
CIES မှ ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့တနျကွေးအမွငျ့ဆုံး ကစားသမား ထိပျဆုံး (၁၀)ယောကျ
၁. ဟယျရီကိနျး Harry Kane ယူရို (၂၀၁.၂)သနျး
၂. နမော Neymar ယူရို (၁၉၇.၅)သနျး
၃. ဘာပေ Mbappe ယူရို (၁၈၆.၅)သနျး
၄. မကျဆီ Messi ယူရို (၁၈၄.၂)သနျး
၅. ဆာလာ Salah ယူရို (၁၇၁.၃)သနျး
၆. အယျလီ Alli ယူရို (၁၇၁)သနျး
၇. ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ယူရို (၁၆၇.၂)သနျး
၈. ဂရဈဇျမနျး Griezmann ယူရို (၁၆၄.၅)သနျး
၉. ဒီဘားလား Dybala ယူရို (၁၆၄.၂)သနျး
၁၀. လူကာကူ Lukaku ယူရို (၁၆၃.၄)သနျး